What Is Cloud ERP ?
Posted by Vanguard on: July 30, 2021
WHAT IS CLOUD ERP? The term enterprise resource planning (ERP) was introduced in the 1990s to describe software that automates business processes acrossacompany – from financials to distribution and manufacturing. In those early days, ERP systems were typically implemented Read More >
Focus Five Things To Make A Successful ERP Implementation
Posted by Vanguard on: June 18, 2021
1. Planningaproject with reasonable assumptions, expectations, resources, budgets and both team roles and responsibilities will dramatically enhance success of implementation. It is important to recognize that as the company implementing new enterprise technology, you and your team Read More >
လူကြီးမင်း၏ လက်လီအရောင်းဆိုင်အတွက် အကောင်းဆုံး POS Software ကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း?
Posted by Vanguard on: January 7, 2021
လက်လီအရောင်းကုမ္ပဏီများသည် မှန်ကန်သော လက်လီရောင်းဝယ်ခြင်းစနစ် (POS) က ၎င်းတို့အား ပြိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပယ်၌ နှာတစ်ဖျားသာစေနိုင်သည်ကို သဘောပေါက်ကြပြီး POS စနစ်ကို ငွေသိမ်းစက်အနေဖြင့်ထက် ပိုမို၍အသုံးချနိုင်သည်ကို နားလည်ကြသည်။ ၎င်းကို ပစ္စည်းစာရင်းပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ၊ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ၊ ပုံမှန်စားသုံးသူများအား လက်ဆောင်ပေးခြင်း အစီအစဉ်များနှင့် စားသုံးသူဆက်ဆံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုချက်အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ စားသုံးသူများကို တစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်မှုအလိုက် ထိရောက်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေး၍ အကြိုက်တွေ့စေရန် လိုအပ်သော နည်းကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောင်မြင်သော လက်လီရောင်းချသူများသည် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကောင်းဆုံး POS Read More >
Business Transformation တစ်ခုက ဘယ်လောက် ခက်ခဲလဲ၊ ဒါကို Huawei က ဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့လဲ…
ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ လုပ်ငန်းရဲ့ရေရှည် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဒီဂျစ်တယ် ပြောင်းလဲမှု (Digital Transformation) တွေပြုလုပ်နေကြစဉ်မှာ Huawei ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့လည်း ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Business Operation တွေနဲ့ Transformation တွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့ Huawei လို ကုမ္ပဏီကြီးမှာ အရင်က လက်တွန့်နေခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် (၃၀) အတွင်းမှာ Huawei တရှိန်ထိုး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာကို တကမ္ဘာလုံးက သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Huawei အနေနဲ့ ဒီလို ပြောင်းလဲမှု Read More >
New Normal ကာလလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို မည်သို့ကိုင်တွယ်အသုံးချနိုင်မည်နည်း?
Posted by Vanguard on: December 2, 2020
မကြုံစဖူး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသောအခါ လူသားအရင်းအမြစ်များ (HR) သည် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပြီး နေအိမ်မှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ခွင့်ရက်ရှည်ယူခြင်း၊ အလုပ်ခေတ္တရပ်နားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့ခြင်း၊ မကြာခဏထုတ်ပြန်သော အစိုးရအမိန့်များနှင့် စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်းစသည့် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထို့အပြင် HR အနေဖြင့်၂၀၂၁ ခုနှစ်နှင့် နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ဘတ်ဂျက်နှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများ အလွန်ကွာခြားသွားမည်ကိုလည်း ကြိုတင်တွက်ဆ ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအကျပ်အတည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပုံကို ပြောင်းလဲလိုက်သည်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ကို စနစ်တကျဖြစ်စေရန် စီစဉ်ပေးသည့် Read More >
SAP Business ByDesign ရဲ့ အဓိက Financial စွမ်းဆောင်ရည် (၁၀)ချက်
Finance Director ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ CFO တွေအနေနဲ့ ယခုအချိန်မှာ strategy များရေးဆွဲခြင်း၊ Decision ချမှတ်ခြင်း နဲ့ Organization Transformation တွေမှာပါ ဦးဆောင်နေရပါတယ်။ ဒါတွေကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာလို့ ခိုင်မာတဲ့ Finance Function တွေ လိုအပ်တာလဲ? Financial Information တွေကို စောင့်ကြည့်၊ တိုင်းတာခြင်းတွေက လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အသက်သွေးကြော ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ၊ ငွေကြေးချေးငှားပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ CFO Read More >
မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းကနေ E-Commerce ကိုအောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုလုံးရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအတွက် စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်မျာအတွက်… မိရိုးဖလာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို စတင်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ရှိကြလဲ။ ဘာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ လိုမလဲ။ မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းအများစုဟာ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေကို စတင်ဖို့ လက်တွန့်နေလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ အရင်တည်းက စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့ စာရွက်စာတမ်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေတယ်၊ အိုင်တီနည်းပညာ အကူအညီကို မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်ကြတယ်၊ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ကီးပတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုပဲ တောက်ေလျှာက် အသုံးပြုလာပြီး Feature တွေ၊ Function တွေ အစုံပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းကို အသုံးမပြုရသေးတဲ့ သူနဲ့ တူပါတယ်။ (ယှဉ်ပြီး သုံးဖူးလိုက်မှ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး လွယ်ကူအဆင်ပြေတယ်၊ အလုပ်တွင်ကျယ်တယ်ဆိုတာကို သိကြပါတယ်။) နောက်တချက်က Risk မယူရဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်ပေါ် ကူးပြောင်းပြီးမှ အရင်က တည်ငြိမ်နေခဲ့တဲ့ Read More >
Cloud ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချပြီး သင့် Business Transformation ပြုလုပ်ပါ။
Business Transformation လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဘာကို အရင်မြင်ပါသလဲ? Digital Transformation ကို အရင်မြင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းစု၊ အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် Business Transformation ဆိုရင် IT Transformation ကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ IT Transformation အတွက် Cloud ကို အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးအချက်က သင့်လုပ်ငန်းမှာ သုံးမယ့် cloud ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Cloud Service တစ်ခုကို အသုံးမပြုခင် စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သင့် လုပ်ငန်းရဲ့ Goal အသစ်တွေ (ဥပမာ - စျေးကွက် အသစ် ဖောက်ချင်တာ၊Skillful ဖြစ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲ Business ကို ဆက် run ချင်တာ) စတာတွေကို ချမှတ်လိုက်ပြီဆိုရင် ဒီ Goal တွေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်းကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်မလဲ ဆိုတဲ့ Business Transformation ကို အရင်ဆုံး စဉ်းစား သင့်ပါတယ်။ Business Transformation အပိုင်းပြီးမှ ဘယ်လို IT Support တွေပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ IT Transformation အပိုင်းလာပါတယ်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ပြည့်စုံတဲ့ IT Transformation ဖြစ်ဖို့ အဓိက အကြောင်းအရင်း (၅) ခု Business Process တွေကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး IT Read More >
RPA အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သောအချက် (၅) ချက်
Posted by Vanguard on: November 9, 2020
Robotic Process Automation (RPA) ဆိုတာ Business Process တွေကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံး(Rule-Based) တွေကို အခြေခံထားပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ရတဲ့ (Repetitive Business Process)တွေကို RPA နည်းပညာနဲ့ အလိုအလျောက် ပြုလုပ်တဲ့အခါ Value ပိုပေးနိုင်တဲ့ Business Activity တွေကို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ RPA ဆိုတာ Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, Robotics နဲ့ IoT (the Internet of Things) စတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ technology solution ပဲဖြစ်ပါတယ်။ RPA ကနေ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းကို သက်ရောက်နိုင်တဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ Automation ကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ။ Gartner ရဲ့ လေ့လာချက်အရအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ Read More >
လက်လီရောင်းချခြင်း၏ Digital အနာဂတ်
Posted by Vanguard on: October 22, 2020
ဈေးဝယ်ထွက်ရာမှာ စတိုးဆိုင်သို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွား၍ ရွေးချယ်ဝယ်ယူခြင်းက အများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သော်လည်း အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ခြင်းဟာ လူအများကပိုမိုနှစ်သက်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ လျင်မြန်စွာပဲ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။အလုပ်တွေ၊ ဝင်ငွေနဲ့ အပန်းဖြေချိန်တွေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံလာရတာကြောင့် ကပ်ရောဂါကိုတုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့် consumer တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ခြင်းကလည်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် သက်သာလွယ်ကူမှုများကြောင့် အားထားရတဲ့ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူမှုအကြိမ်ရေ နည်းသေးတဲ့ ဈေးဝယ်သူတွေကြားမှာပင်လျှင် eCommerceနဲ့ contactless (ထိတွေ့စရာမလို)တဲ့အရောင်းလမ်းကြောင်းတွေကို ရှေးရှုပြီး မကြုံစဖူးပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်ကို မျက်မြင်တွေ့ကြုံနေကြရပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ Digital နည်းဖြင့် လက်လီရောင်းချခြင်းဟာ လျင်မြန်စွာပဲ မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ Digital လက်လီရောင်းချမှုနည်းစနစ်တွေမှာ Read More >
Copyright Vanguard Myanmar Co., Ltd. © 2022 Designed by: ERA Myanmar